तपाईमा पनि यस्तै समस्या देखा परेको छ ? सावधान ! चिकित्सकलाई भेटिहाल्नुस् « Lokpath
२०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १४:०८
प्रकाशित मिति : २०७६, ६ भाद्र शुक्रबार १४:०८
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार “स्वास्थ्य भनेको रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था तन्दुरुस्त हुनु पनि हो ।”
भनिन्छ स्वास्थ्य हाम्रो जीवनको धन हो । हामी स्वस्थ्य भएमा मात्र हामीले जीवन सुन्दर ढंगले अगाडी बढाउन सक्छौं । स्वस्थ रहनका लागि खानपान सहि, सन्तुलित र स्वस्थ्य खानपान गर्नुपर्छ ।
आजकाल हाम्रो खानपान नमिल्दा धेरै मानिस विभिन्न मानिसहरु रोगको शिकार बनेका छन् । भनिन्छ, खान नपाएर जति मानिस मर्छन्, उत्तिनै खान नजानेर । अस्वस्थ्यकर खानपान रोग र मृत्युको कारण हो ।
आजभोली मानिसहरु यति व्यस्त हुन्छन् कि जसले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल गर्नै भ्याउदैनन् । जसले गर्दा कोहि न कोहि, केहि न केहि रोगको शिकार भएका छन् । व्यस्तताले गर्दा आफ़्मो शरीरमा आएको देखा परेका विभिन्न रोगका संकेतहरुसम्म थाहा पाउदैननन् र त्यसलाई व्यवास्ता गरिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा मानिसहरु ठुलै रोगबाट ग्रसित हुन्छन् । त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यबारे नियमित जानकार रहनु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यी हुन् नराम्रो स्वास्थ्यको संकेत
माथिका यी समस्याहरु देखा परेमा तपाइको स्वास्थ्य ठिक छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । यस्ता सानोतिनो समस्याहरुलाई वेवास्ता गर्दा तपाइको स्वास्थ्यमा ठुलो असर पनि पुग्न सक्छ । त्यसले बेलैमा स्वास्थ्य परिक्षण गरि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधोपचार गर्नुपर्छ । एजेन्सी